Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta saxiixay sharciga dhismaha guddiga madaxa banaan (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta saxiixay sharciga dhismaha guddiga madaxa banaan (SAWIRO)
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta saxiixay xeerka guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka, xeerkaas uu baarlamaanka federaalka uu meel mariyay bishii ee sanadkaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadaan khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in dhowrista xuquuqda aadanaha ay qeyb ka tahay dhismaha dowlad wanaagga iyo in nabad iyo caddaalada lagu wada noolaado.
“Saxiixa sharcigan waxaa uu si cad uga tarjumayaa muhimadda aan siineyno dhowrista xuquuqaha aasaasiga ah iyo xorriyadaha qof walba oo ku nool Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay tahay inuu helo. Guddigan Madaxa Banaan ee Xuquuqda Aadanaha waxaa uu noqonayaa xafiiska ugu sarreeya dalka ee u xilsaaran inuu sugo in xaqa muwaadiniinta sida ay tahay loo ilaaliyo, cid walbana lagula xisaabtamo iyadoo la tixraacayo dastuurka iyo shuruucda kale ee inoo degsan’’, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Dhinaca kel, guddiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka oo muddo sugaayay inuu madaxweyne Xasan Sheekh saxiixo xeerkaan ayaa muhiim u ahaa arrimaha xuquuqda aadanaha Soomaaliya, waxayna dowladda Xasan Sheekh ku qaadatay inay xeerkaan ansixiso bilihii ugu danbeeyay ee sanadkaan.
Xafladaan lagu saxiixayay xeerka guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ayaa ka dhacday Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qeyb galay madax ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeysay wasiirka haweenka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dambeyntii ka hadlay arrimaha siyaasadda dalka ayaa ka hadlay muhimadda in xisbiyo siyaasadeed la sameysto, khatarta siyaasadaha qabiilka ku dhisan, qoondada haweenka ay ku leeyihiin goleyaasha siyaasadeed ee lasoo dhisayo doorashada 2016 iyo in la dhiirigeliyo midnimada iyo dib u dhiska dalka.